Sheekada filimka October: bandhiga Varun Dhawan oo heer sare ah iyo sheeko jaceyl reer magaalka loogu tala galay – Filimside.net
Sheekada filimka October: bandhiga Varun Dhawan oo heer sare ah iyo sheeko jaceyl reer magaalka loogu tala galay
Xidiga sal dhigtay Varun Dhawan waxaa tiyaatarada loo saaray filimka October oo ka duwan fariimihii uu horey u sameeyay waana fariin jaceyl oo aan arimo ganacsi lagu lifaaqin sidoo kalena reer magaalka loogu tala galay.
Jilaayaasha filimkaan: Varun Dhawan, Banita Sandhu, Gitanjali Rao, Sahil Vedoliyaa.
Qiimeynta sheekada filimkaan: 3/5 (sedex dhibcood)
Waqtiga uu soconaayo filimkaan: 1-saac iyo 56-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan October: Qaabka sheekada uu Director Shoojit Sircar u dhigay iyo bandhiga Varun Dhawan oo heer sare ah ayaa loo daawan doonaa filimkaan.
Muxuu Ku Liitaa October: Waa film gaabis ka muuqdo dhanka isku daba ridka sheekada, sidoo kalena malahan mada daalo dhameestiran waana labada iin uu leeyahay.
Fariinta Filimka October Xambaarsan Yahay Oo Kooban: Dan (Varun Dhawan) iyo Shiuli (Banita Sandhu) waa labo arday oo dhalinyar kuwaas oo hal Hoteel ka shaqeeyaan.
Dan waa wiil daacad ah sidoo kalena jecel shaqadiisa inay 100% toosnaato taasina waxay sababeysaa inay mararka qaar isku dhacaan shaqaalaha iyo maamulaha Hoteelka.
Shiuli waa gabbar dagan oo caqli badan marwalbana ku dadaasho in maamulaheeda iyo shaqaalaha la shaqeeyaan aysan ka sheeganin.
Dan iyo Shiuli waa labo shaqsi oo shaqada isku barteen balse saaxiibtinimo qoto dheer ka dhaxeynin, waxaana dhaceyso habeen sanadka cusub loo dabaal dagayo dhamaan shaqaalaha Hoteelka ay Shiuli kasoo dhaceyso dabaq 13-biyaano ah.
Shiuli waxay galeysaa koomo sidoo kalena xasuusta ayaa ka lumeyso dhamaan shaqaalaha Hoteel-ka wey iska hilmaamayaan gabadhaan balse Dan nafsadiisa waxay siin weynee inuu Shiuli hilmaamo markii dhaqaatiirta ay u sheegaan qofka ugu dambeeyay magaciisa hadal heesay inuu isaga ahaa.
Sidaa darteed Dan wuxuu diirada saaraa sidii uu Shiuli ugu dadaali lahaa miirkeeda ugu soo laaban lahaa asigoo jeceyl u qaadayo gabar sariir saaran oo aan ogaal laheyn wuxuuna la kulmayaa xanuun badan oo aysan cidna garab ku siineyn.
Maxaa laga yiri fariinta filimka October: Qoraa Juhi Chaturvedi iyo Director Shoojit Sircar waxay ku guuleesteen sheeko aad u qiiro badan inay xoogaa mid habacsan ka dhigaan si qof walbo u daawan karo sidoo kalena fariintooda u jeedkeeda kama aysan weecanin.
Laakiin Shoojit Sircar wuxuu ku guul dareestay sheekada inuu u yeelo gunaanad adag waxaana la tagtay ku dhex jirada qiirada filimka taasi oo October ka dhigeyso sheeko jaceyl qurux badan aad u qiiro badan laakiin aan dhameestirneyn.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Varun Dhawan wuxuu la yimid bandhigiisii ugu wacnaa ebid mudada 6-sano ee uu fanka Hindiya ku jiro, wuxuu doortay fariin adag oo jilaayaasha dhalinta yar ku dhiiran karin wuxuuna u mataley si heer sare ah oo uu mudan yahay in abaal marino lagu siiyo.
Varun Dhawan wuxuu muujiyay inuu door walbo iyo fariin walbo matali karo sidoo kalena waa jilaa waaya aragnimo shaashada ka helay tijaabo walbo ee uu sameeyana amaan weyn ka dhaxlaayo.
Banita Sandhu doorkeeda waa mid wacan qaybaha hore balse qaybaha dambe aamusnaanteeda oo badan iyo sariir ay saaran tahay ayaa sababtay in Varun Dhawan shaashada kaga saameyn badnaado balse gabadhaan fanka ku cusub bilaabasheeda ma xumo.
Gunaanad: October waa fariin reer magaalka loogu tala galay iyo sheeko jaceyl oo aysan daawadayaasha Bollywood-ka u baranin qaabka loo dhigay taasi waxay sababi doontaa fagta hore in filimkan siweyn loo soo dhaweynin, balse bandhiga heerka sare Varun Dhawan iyo sheekada filimkaan qaabka loo dhigay ayaa sababi doonto daawadayaasha reer magaalka si wacan u daawadaan laakiin waa mashruuc fariintiisa xadidan tahay oo Hindiya dhan laga wada daawan doonin.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka October:
Waxaa Aqrisay 991